एमाले–माओवादी एकताबारे के भन्छन् माधव नेपाल … – | Nepaliasmita:: For Latest Nepal news and updates
एमाले–माओवादी एकताबारे के भन्छन् माधव नेपाल …
त्यही कारण उनले पटक–पटक जवाफ दिए, ‘दुई नेताबीच राम्रै छलफल भइरहेको होला ।’ समानुपातिक चुनाव परिणाम घोषणामा भएको ढिलाइ, भावी सरकारको खाका, वाम एकताबारे पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग हरिबहादुर थापा र दुर्गा खनालले आजको कान्तिपुरमा गरेको कुराकानीका केही अंश :
कसैले केही कमजोरी खोजिरहेका होलान्, त्यसैले तोड्छौं भनेका होलान् । साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्ने कोसिस भइरहेको होला तर पनि गठबन्धन कसिलो छ ।
राष्ट्रिय सभा अध्यादेशले केही ढिलो भयो होला तर अब किन ढिला ?
परिणाम घोषणा रोक्न त्यस्तो काम गर्ने सवाल नै आउँदैन । कुन मितिसम्म कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाब–किताब हामी पनि गर्न सक्छौं । राज्य सञ्चालनमा हाम्रो पनि अनुभव छ ।
त्यसो भए तपाईंहरूबीचकै छलफल पारदर्शी छैन ?
माओवादीको संगठन ठूलो छ, उहाँहरू पनि ठूलो भयो भन्नेमै हुनुहुन्छ । हामी पनि सानो बनाउने पक्षमा छौं । छरितो र कामकाजी हुनुपर्छ । धेरै मानिसलाई संगठित गर्नेखालका संरचना बनाउनुपर्छ । कुन व्यक्ति कुन तहको हो भनेर बुझ्ने खालको कमिटी बनाउनुपर्छ । पार्टीभित्र विभागहरू बनाउनुपर्छ र पेसा–व्यवसायीलाई संगठित गर्नुपर्छ ।
ममा क्षमता छ-छैन भन्नेमा मैले गीत गाएर हुँदैन । मेरो भूमिका, आवश्यक योग्यता, क्षमता, अनुभवले काम गर्छ भने अवश्य पनि कहीं मेरो खोजी हुन्छ । मैले किन चिन्ता गर्नु ?